विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट किन्यो प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा विजुली ! |
Home राजनीति विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट किन्यो प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा विजुली !
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी राष्ट्र भारतबाट महाँगो मूल्यमा विजुली किन्ने भएको छ । प्राधिकरणले विहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा भारतबाट विजुली खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो ।